Abhekene noxhaxha lwamacala amaphoyisa | IOL Isolezwe
Abhekene noxhaxha lwamacala amaphoyisa
Isolezwe / 22 June 2012, 12:13pm /
ABHEKENE noxhaxha lwamacala angu-71 amaphoyisa akwaKito (Cato Manor), abesedume ngokuba ngomashayabhuqe kubasolwa, abeyofaka isicelo sebheyili eNkantolo, izolo.
La maphoyisa angu-20 aboshwe ngoLwesithathu kodwa esevela eNkantolo yesiFunda eThekwini kuvele ukuthi asengu-18 abhekene nala macala.
Amanye amabili kuthiwa ahoxisiwe amacala awo ngezizathu ezaziwa wuphiko lwezokushushisa, iNational Prosecuting Authority (NPA).
Phakathi kwamacala abhekene nala maphoyisa kubalwa angu-14 okubulala, ayisishiyagalolunye awokubulala okuhlobene nemboni yamatekisi, ayisikhombisa ababulawa ngenxa yokuqhumisa imishini yemali, ama-ATM, ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho, ukugqekeza ngenhloso yokubulala, ukweba nawokushaya ngenhloso yokulimaza nokucekela phansi impahla.
Umphenyi wecala ovela ophikweni loKlebe, uColonel Frans Khola, uthe uphenyo lwabo luyaveza ukuthi la maphoyisa abesebenzisa indlela eyodwa ukubulala abasolwa, nabanye abantu njengoba abethi aqale ahlaselwa abe eseziphindiselela.
UKhola uthe uphenyo lwabo luyakuveza ukuthi iningi lalaba ababulawa babesuke bengahlomile, abanye belele, abanye bengebona ngisho abasolwa.
Ucaphune esinye isigameko sokubulawa kukaKwazi Ndlovu (15) owabulawa elele kusofa ngoMashi 2010, eMpangeni.
UKhalo uthe la maphoyisa abebabulala phambi kwemindeni yabo labo asuke ebafuna okukhona kubo nezingane ezincane obekuthi uma beke basho okwenzekile bathole izinsongo zokubulawa.
Ohola ithimba labameli babasolwa, u-Advocate Guido Renzhorns SC, uthe kumele badedelwe ngoba bababambisene nabebephenya kusukela kuqala unyaka, kwaze kwaba bayaboshwa.
ENkantolo kuphinde kwavela ukuthi kuzongezwa amanye amacala okubulala kulawa akhona njengoba oKlebe becele ukuthi banikwe amanye amasonto amabili ukuze baphothule uphenyo lwabo oluzoholela ekutheni kwengezwe amanye amacala okubulala angu-16.
Kule nkantolo beziqinile ezokuphepha, ngaphakathi nangaphandle kutshalwe inqwaba yamaphoyisa.
Kukhona abantu abebephethe izingqwebhe ezikhombisa ukuzwelana nala maphoyisa aboshiwe, bethi angamaqhawe abo.